China Chikamu chechitatu chinoona kutengeserana kwekunze kunowedzera vagadziri uye vanotengesa | Mvura yakachena
Chikamu chechitatu chinoona kutengeserana kwekunze kuchiwedzera
China yekutengeserana nedzimwe nyika yakawedzera mukota yechitatu kusvika pakurekodha kumusoro, zvichiita kuti kuwedzera kwegore-kusvika-zuva kukura mukutengesa kunze kwenyika uye kutengeswa kutendeuka kubva pane zvakaipa kuenda pane zvakanaka, sekureva kwetsika dhata.
Musoro wekukura kwekutengesa kunze kwenyika mumadhora mazwi wakakwira zvakare kusvika pa9,9 muzana gore pagore munaGunyana kubva pa9.5 muzana muna Nyamavhuvhu, zvichiratidza mwedzi wechitanhatu wakateedzana mwedzi wehuwandu hwekunze hwakakwira kupfuura fungidziro yemusika.
Kunze kwenyika, zvakadaro, kwakawedzera ne13.2 muzana kubva pagore rapfuura, kuchichinja iyo 2.1 muzana-gore-gore-gore muna Nyamavhuvhu, pamusoro pekutarisirwa kwemusika uye kudzikisira musoro wenyaya wekutengeserana kusvika US $ 37 bhiriyoni munaGunyana kubva US $ 58.9 bhiriyoni muna Nyamavhuvhu.
Kutsiga kweChina mukutengesa zvinhu kunze kwenyika kwave kuchikurudzirwa nehunhu hwayo sehupfumi hwekutanga mukati uye hwekutanga kunze kwedenda re COVID-19, iro rakakonzera kuwedzera kwekutengeswa kwePPE (michina yekuzvidzivirira yega) uye basa / kudzidza-kubva-kumba zvigadzirwa , nepo vakwikwidzi vachiri kutsvairwa nedenda iri, sekureva kwekambani yemari yeNomura.
"Kuwedzera kweChina kunze kwenyika kunogona kuramba kwakakwidziridzwa kwemimwe mwedzi yakati wandei nekuda kwemafungu eECVID-19 mhiri kwemakungwa," akadaro Lu Ting, mukuru wezvehupfumi weChina waNomura. "Kune rimwe divi, kuvandudzwa kwaSeptember mukukura kwekupinza zvinhu zvikuru munyika nekuwanda kwehuwandu hunoratidza kudiwa kwakasimba mudzimba uye kumwe kutangazve."
Goldman Sachs anotarisirawo simba rekutengesa kunze kuti rirambe richiita mumwedzi iri kuuya uye kuti kupinza kunze kwenyika kunogona kuramba kuchikura kumashure kwekuenderera kwekudzoreredza mumabasa epamba.
Mumakota matatu ekutanga e2020, kutengeserana kwekunze kwekunze kwakawedzerwa ne0.7 muzana gore pagore kusvika 23.12 trillion yuan (US $ 3.43 trillion), nekutengesa kunze kwenyika kunowedzera kusvika pa12,71 trillion yuan, kuwedzera kwe1.8 muzana kubva pagore rapfuura, nepo kutengeswa kwenyika. yakanyikwa ne0,6 muzana kusvika 10.41 trilioni yuan, General Administration yeCustoms yakati Chipiri.
"Mukutarisana nekukanganisa kwakanyanya kwe COVID-19 denda, China yakawedzera kuita kwayo kwakawanda, yakaedza kwazvo kuona kugadzikana pamatanho matanhatu nekuchengeteka munzvimbo nhanhatu," akadaro Li Kuiwen, director wedhipatimendi rehuwandu hwetsika.
"Takaita budiriro huru mukudzivirira pamwe nekudzora denda iri uye mukusimudzira hupfumi uye magariro, uye mhedzisiro yemitemo yekusimudzira kutengeserana kwekunze yakaramba ichioneka, nekutengeswa nekutengeswa kunze zviri nani zvakanyanya kupfuura zvaitarisirwa," akadaro Li.
Mushure mekuona kushamisika mukota yekutanga, kupinzwa uye kutengeswa kunze kwenyika zvakadzorerwa zvakanyanya muna Kubvumbi-Chikumi nguva asi vachiri kutumira kuderera kwegore-pagore.
Muchikamu chechitatu, China yekutengesa kunze kwenyika nekutengesa kunze kwenyika yakawedzera kusvika 8.88 trillion yuan, ichiwedzera 7.5 muzana gore pagore, pakati payo kunze kwenyika kwakakwira 10.2 muzana kusvika ku5 trillion yuan uye kupinza kwakakwira 4.3 muzana kusvika 3.88 trillion yuan. Ese matatu manhamba aive ese-enguva yakakwira kwekota.
Sangano reSoutheast Asia Nations raive rakanyanya kudyidzana neChina muzvikamu zvitatu zvekutanga.
China yekutengeserana nedzimwe nyika neASEAN yakawedzera 3.38 trillion yuan, kuwedzera kwe7.7 muzana, kuverengera 14.6 muzana yemusoro weChina wevatengesi vekunze mumwedzi mipfumbamwe yekutanga.
Kutengeserana neEuropean Union kwakawedzera kusvika ku3.23 trillion yuan, kukwira 2.9 muzana, zvichiita kuti EU China ive yechipiri pakukura mukutengeserana. Kutengeserana kweChina neUnited States kwakadzikira kubva pakuderera kwekutanga, iine kukosha kuchikwira zvikamu zviviri kubva muzana kusvika 2.82 trillion yuan panguva iyi.
Kutengeserana nenyika dziri pedyo neBelt neMugwagwa, zvakadaro, dzakakura 1.5 muzana kusvika pa6,75 trillion yuan.
Tsika dzakaratidza kukura nekukurumidza mukutengeserana kwekunze nemabhizinesi akazvimirira. Mumakota matatu ekutanga egore, vakapa huwandu hwakawanda hwe10,66 trillion yuan kuChina nekutengesa kunze kwenyika, kukwira 10,2 muzana gore pagore, kuverengera 46.1 muzana yehuwandu hwekutengeserana kwekunze hwaive 4 muzana poindi yakakwira kupfuura mune imwecheteyo. nguva gore rapfuura.
Pakati peiyi huwandu, mabhizimusi akazvimiririra akatumira kunze kwenyika kwese 7.02 trillion yuan, kuwedzera kwakapetwa kwegumi muzana, kuverengera zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvemutengo wakazara wekutengeswa kweChina, nepo kutengeswa kwenyika kwakawedzera ne10.5 muzana kusvika 3.64 trillion yuan, kuverenga 35 muzana yeiyo musoro wenyaya unopinda kunze kwenyika.
Munguva imwecheteyo, mabhizinesi ekudyara kune dzimwe nyika akabatsira kupinza kunze kwenyika uye kunze kwenyika kwe8,91 trillion yuan, kuverengera makumi matatu neshanu muzana. Kunze kwenyika uye mabhizimusi ehurumende-anowanikwa kunze kwenyika uye kunze kwenyika zvakapfuura 3.46 trillion yuan kuverengera zvikamu gumi nezvishanu muzana.
Maitiro ekutengeserana akaenderera mberi achigadziriswa, pamwe nehuwandu hwekutengeserana kwakazara mukutengeserana kwenyika dzese kuri kuwedzera, akadaro Li.
Mumwedzi mipfumbamwe yekutanga, China yekutengeserana yakawedzera 2.1 muzana kusvika 8.55 trillion yuan, ichiita 60,2 muzana mukutengesa kunze kwenyika uye kunze kwenyika yaive 0.8 muzana poindi yakakwira kupfuura panguva imwecheteyo gore rapfuura.
Panyaya yemabhizimusi, kutengeswa kwenyika nezvinhu zvekudzivirira, malaptop nemidziyo yemumba zvakaitwa zvakanaka, nekuda kweshanduko yemararamiro inounzwa nedenda.
"Kuvhurwa kwezvinhu zvitsva zvemagetsi zvevatengi uye kudiwa kwemabasa-kubva-kumba zvigadzirwa zvakawedzera kutengeswa uye kutenderera kwechigadzirwa," akadaro Betty Wang, nyanzvi yezvehupfumi hweChina kuAustralia neNew Zealand Banking Group.
Nomura's Lu anotenda kuti kudiwa kwemalaptop kunogona kuramba kwakasimba kwemwedzi yakati wandei, "sezvo chiri chimwe chezvinhu zvakakosha zvemidziyo inodiwa pakudzidza pamhepo, kunyangwe simba rayo richipera simba sekudzokera kuchikoro."
Zvakare zvecherechedzo, kunze kwenyika kwemishonga yemishonga uye ekurapa mahebhu akasvetuka 21.8 muzana, nepo iyo yezvokurapa zviridzwa uye zvishongedzo zvakadzvanywa 48.2 muzana.